China Outdoor propane afo lavaka Manufacture sy Factory | Chuliuxiang
Lavaka afo propane ivelany
Ny rafitra vy maharitra amin'ny lavaka afo azo entina dia misy loko mainty mahatohitra hafanana. Miaraka amin'ny toetrandro mahatohitra, mahazaka enta-mavesatra lehibe, maharitra maharitra ary tsy misy harafesina.
Ny fivoriambe tsotra dia manamboatra ity vondrona ity amin'ny 28 x 28 x 24 santimetatra ka mahatonga azy io ho haavony tonga lafatra hanangonana namana sy fianakaviana manodidina ny fandoroana 30,000 BTU.
Avereno ny tokotaninao na patio ho toeram-piarahamonina eo noho eo amin'ny alina miaraka amin'ity lavaka fandoroana propane ity. Ity fatana fatana vy mahatohitra ny toetr'andro mahafinaritra ity dia ahitana taila vita amin'ny tànana vita amin'ny tanimanga sy takela-by vita soratra izay manafina tanky propane 20 lb (tsy tafiditra). Ny lavaka mahery vaika 30.000 BTU dia mirehitra miaraka amin'ny fanosehana mora ary mamadika ny afo, miaraka amin'ny haavon'ny lelafo azo amboarina ao anatin'ny vatolampy lava rustic (tafiditra).
Ity lavaka fandoroana vy tsy misy kilema ity dia mampiasa mantel vy, miaraka amin'ireo singa mahazatra amin'ny fanaka avo lenta. Ny fototry ny haingon-trano dia manafina amim-pahakingana ny tank propane (tsy tafiditra) sy ny tontonana fanaraha-maso, ka mahatonga azy io ho ivon'ny trano fonenana ivelany. Afaka mankafy ny atmosfera rehetra amin'ny fatana mahazatra ianao nefa tsy mila mikarakara ny lavenona. Ankoatra ny hatsaran-tarehy, ity vondrona ity dia misy lava, izay manasongadina tsara ny lelafony.
* Ahitana vatolampy lava
* Ny varavarana manafina tanky sy ny tontonana fanaraha-maso
* Tosika mora sy mihodina ny afo
* Haavo lelafo azo amboarina
teo aloha: Rotisserie Oven Rotating Barbecue Grill
Manaraka: 30 mirefy vy saribao afo lavaka
makarakara entona ivelany
portable afo lavaka
lavaka afo propane
Stainless vy BBQ grille gasy
Fandoroana entona 2 Burner BBQ
Tabletop barbecue entona grill